Kitra – Fifanintsanana «Can 2019»: vonona hanohitra ny Senegaley ao an-taniny ny Barea | NewsMada
Kitra – Fifanintsanana «Can 2019»: vonona hanohitra ny Senegaley ao an-taniny ny Barea
Hifantoka any Sénégal avokoa ny sain’ny mpitia fanatanjahantena rehetra, anio, indrindra ireo mpankafy ny baolina kitra. Hidona amin’ny Lionan’i Teranga ao an-kianjany mantsy ny Barea de Madagascar, ao anatin’ny fahavononany tokoa.
Hotanterahina, anio asabotsy 23 sy rahampitso alahady 24 marsa, manerana an’i Afrika, ny andro farany amin’ny fifanintsanana isam-bondrona, hiadian-toerana amin’ny (Can 2019), taranja baolina kitra. Anisan’izany ny fihaonana hikatrohan’ny Barea de Madagascar sy ny Lionan’i Téranga, avy any Sénégal, hotontosaina, anio ao amin’ny kianja Lat Dior, ao Thiès, Dakar.
Vonona tanteraka ny Barea de Madagascar, hanohitra an-dry zareo Senegaly na hilalao eo amin’ny kianjany sy manoloana ireo mpanohana azy aza ny Lionan’i Teranga. Salama tsara avokoa ireo mpilalao malagasy, ary ambony ny toe-tsain’izy 20 mirahalahy hiatrika ity fihaonana azo lazaina fa manan-danja ity.
Andrasan’ny rehetra tokoa ity lalao ity satria hiendrika famaranana kely, na efa samy tafita hiatrika ny “Can 2019”, hatao any Egypta, aza ny roa tonta. Omaly no nitsapa ny kianja Lat Dior ny Barea de Madagascar.
Araka ny vaovao voaray, handahatra ireo mpilalao efa manana traikefa sy zatra lalao goavana i Aliou Cissé, mpanazatra senegaley, amin’ity fihaonana, hikatrohana amin’ny Barea de Madagascar, ity. Ho tazana ao amin’ny vodilaharana ry Wagué sy i Sané ary i Koulibaly miampy an’i Sabaly. I Ndiaye, i Gueye sy i Diatta ny eo afovoany ary Mané sy i Sarr ary i Niang ny any amin’ny fanafihana.
Hilalao ny 4-3-3 izany ny Lionan’i Teranga, anio. Tsy mbola nanambara izay ho 11 hiditra voalohany kosa i Nicolas Dupuis, mpanazatra malagasy. Na izany aza, inoana fa tsy hitsapatsapa izy fa hampijoro avy hatrany ireo heveriny fa mahavita sy afaka manohitra tsara ireo Senegaley.
Tsiahivina fa hanomboka amin’ny 7 ora hariva any Sénégal na amin’ny 10 ora alina eto Madagasikara ny lalaon’ny roa tonta.